Ulifaka njani iliso lokujonga iliso ngokuchanekileyo | Amadoda aQinisekileyo
Imeko yamehlo wamehlo akho athetha lukhulu malunga nomntu ngamnye kuthi, kwaye yile nto Le yenye yeendawo ezindala ngaphambili ukuba asikhathaleli ngokufanelekileyo. Ke ngoko, kubalulekile ukuba sisebenzise unyango oluthile ukuze silukhathalele.
Emva kwama-30, iingxowa, imibimbi, kunye nezangqa ezimnyama zibonakala ngakumbi, Kwaye ukubathintela, kungcono ukusebenzisa indlela ye- ujikelezo lwamehlo nokuba yijel okanye ukhilimu, unakekele loo ndawo imihla ngemihla. Ayilulo naluphi na uhlobo lwekhrim oluza kusebenza kuba olu lusu ukuba sinelungelo phantsi kwamehlo ethu, icekeceke kakhulu kunobuso bakho bonkeKungenxa yoko le nto kufuneka uyitshabalalise ngemveliso ethile egcina indawo i-hydrated kwaye i-elastic, ukuthintela imibimbi kunye nokwenza lula ezo sele sinazo.
Yikholwe okanye ungakholelwa, ezi ntlobo zeemveliso ezithile ziyasebenza, kwaye ewe, imibimbi ayikhangeleki iphawulwe kangaka, konke kuxhomekeke kuwe nasekunyamezeleni kwakho. Okwangoku sineemveliso ezininzi ezisinceda ukuba senze ubomi bube lula ngakumbi kwezi ntlobo zeemveliso, eziqukethe izangqa ezichasene nobumnyama, anti-iibhegi kunye nemibimbi yokulwa imibimbi yonke ibe nye, ibe lukhetho olufanelekileyo kubo bonke abo bangenalo ixesha ukusebenzisa iimveliso ezininzi.
Ungasifaka njani isicelo sokujonga iliso ngokuchanekileyo?
Ngokuqinisekileyo ubonile ukuba uninzi lwabafana luthambisa ulwalamano lwamehlo njengenye ikrimu, ucinezela kumjikelo ngokungathi akukho ngomso kwanokuhlikihla loo ndawo, impazamo! akufuneki urhuqe ulusu ngeminwe yakho, ukuyifaka ngokuchanekileyo kulusu olucekeceke nolubuthathaka njengolo lwentaba yethu, kubalulekile ukuba yenza ngononophelo olukhulu kwaye ngaphezu kwazo zonke ngokuchukumisa okuncinci kuwo wonke umhlaba we-contour Ukuze imveliso ifunxwe ngokugqibeleleyo.
Ukuyisebenzisa, Sebenzisa umnwe wakho wesalathiso kwaye ubeke kuyo, a Inani elincinci lemveliso. Xhasa elo xabiso komnye umnwe wesalathiso sokuhambisa ulwandlalo ngesiqingatha kwaye unamehlo omabini. Ke, kuya kufuneka ubeke i-cream ye-contour kuwo wonke umphezulu wamehlo, ukusuka iinyembezi kude kube sekupheleni iliso, ngaphandle kokulibala emazantsi amashiya, kwikona iliso kunye izangqa emnyama, kwaye nihambe ukunika izinto ezincinci zokuthinta ngohlobo lokuthambisa kunye neencam zomnwe ukuze ngale ndlela ifunxwe, kwaye kwangaxeshanye kusebenze ukujikeleza komjikelo wethu. Impumelelo yonyango iya kuxhomekeka kwisicelo sayo esichanekileyo.
Ukuba kunzima kuwe, Sele kukho imijelo kwifom yokuqengqeleka eququzelela lo msebenzi. Kuya kufuneka uvule isikhongozeli kwaye usebenzise i-roll-on kuyo yonke indawo ejikeleze iliso, ukusuka kumjelo weenyembezi kude kube sekupheleni kweliso, ngaphandle kokulibala iindawo ezikhankanywe apha ngasentla.
Okokugqibela, kubalulekile ukuba Umjikelo wamehlo linyathelo lakho lokugqibela kwisithethe sakho sokuhambisa amanzi, kwaye ngaphezu kwayo yonke loo nto rhoqo ukuqaphela iziphumo.
Kwi -classclass: Izithambiso zamehlo, ngakumbi kunokuba ziyimfuneko
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Ukunyamekela » Zokuthambisa » Ungasifaka njani isicelo sokujonga iliso ngokuchanekileyo
'IiKilties', zamva nje zokuziguqula izihlangu zakho